အလုပျ..အလုပျ..အလုပျ.. အရှယျ ရောကျနသေော လူငယျတဈယောကျအတှကျ အလုပျတဈခုခုတော့ ရှိရမညျသာ။ 'အလုပျ' ဆိုသော ဝိသသေတဈခု နာမညျတဈခုသညျ ပုံမှနျဝငျငှရေဖို့ထကျ ပိုမိုလေးနကျသညျ။ အဓိပ်ပာယျအမြားကွီး သကျရောကျ ရပမေညျ။ သို့မှသာ အလုပျ၏သဘောတရားသညျ လညျး တနျဖိုးမွငျ့တကျလာရပမေညျ။
အလုပျဟူသမြှ ဂုဏျယူရမညျသာ။ ဆိုကျကား နငျးသောအလုပျ၊ ကူလီထမျးသောအလုပျ၊ သနျ့ရှငျး ရေးအောကျခွသေိမျး ဗာဟီရအလုပျမြားမှသညျ မနျနဂြော၊ ရုံးအုပျ၊ မနျနေးဂငျြးဒါရိုကျတာရာထူးမြားထိ ]အလုပျ} ဆိုသော ဝိသသေထဲ၌ ကိနျးဝပျတညျရှိပေ၏။ ဒါက အလုပျကပေးသော သစ်စာတရား။ ထို့ကွောငျ့ ကနြျောတို့အားလုံး အလုပျပျေါတှငျ သစ်စာပွနျရှိရ ပမေညျ။
]သူတဈပါးအလုပျ လုပျနတောပဲကှာ၊ ပေးထား တဲ့လစာနဲ့တနျအောငျပဲ လုပျပေးမှာပေါ့} ဆိုသညျ့ အတှေး သငျ့ခေါငျးထဲဝငျလာခဲ့လြှငျ ခကျြခငျြးထုတျပဈ သငျ့သညျ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော ထိုအတှေးသညျ သငျ၏ ဖွဈတညျနိုငျစှမျးကို ထိနျးခြုပျထားနိုငျသညျ။ သငျ၏အလုပျလုပျနိုငျစှမျးကို အဟနျ့အတားဖွဈစေ နိုငျသညျ။ အခြို့ဝနျထမျးမြား အရညျခငျြးရှိပါလကျြ တိုးတကျသငျ့သလောကျ မတိုးတကျရခွငျးမှာ ထို တဈရာပေးပွီး တဈရာပွနျရလိုသော စိတျဓာတျ ကွောငျ့ပငျဖွဈပသေညျ။
အဘယျ့ကွောငျ့နညျး။ အလှယျတကူ တှေးကွညျ့ လြှငျတော့ ထိုအတှေး ထိုသီအိုရီကွီး မှနျကနျလှပေ သညျဟု ကောကျခကျြဆှဲသုံးသပျကွသူ မြားပလေိမျ့ မညျ။ သို့သျော ထို့ထကျပိုပွီး လကျတှကေ့ကြ သုံးသပျ ကွညျ့ပါက အနညျးငယျလှဲမှားနသေညျကို သိရှိရ ပမေညျ။ အခွခေံအကဆြုံးသီအိုရီကား ဥစ်စာရှိသူကား ဥစ်စာကိုရငျးနှီးမွှုပျနှံကာ ငှကွေေးရှာဖှသေညျ။ ပညာရှိ သူကား ပညာကိုအရငျးအနှီးပွုကာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံ ကွရ၏။ ပညာရော ဥစ်စာပါ မရှိရှာသူကား မိမိ၏ ကိုယျခန်ဓာဖွငျ့သာ ရငျးနှီးရ၏။
ကနြျောတို့ ဝနျထမျးဖွဈရခွငျးမှာ သူဌေးမြားကဲ့သို့ ပစ်စညျးဥစ်စာမရငျးနှီးနိုငျ၍ ပညာအားသျောလညျး ကောငျး၊ လူအားဖွငျ့သျောလညျးကောငျး ရငျးနှီး ပေးဆပျကွရ၏။ သူတဈပါးလကျအောကျ ဝနျထမျး ဖွဈလာ၍ မလုပျခငျြလုပျခငျြနှငျ့ တှဝေနေေ၍မဖွဈ။ အလုပျသညျ ကနြျောတို့ကို ထမငျးကြှေး၏။ အလုပျ သညျ ကနြျောတို့ကိုငှကွေေးပေး၏။ အလုပျသညျ ကနြျောတို့ ဖွဈစခေငျြသော ဘဝရညျမှနျးခကျြ အနာဂတျအိပျမကျမြားကို တဈဖကျတဈလမျးမှ ကူညီဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျ၏။
ထိုသို့သော ကြေးဇူးမြားပွားလှနျးသညျ့ ]အလုပျ} ကို အဘယျမှာလြှငျ မခဈြဘဲမနရေအံ့နညျး။ အဘယျမှာလြှငျ တနျဖိုးမထားမလေးစားဘဲ နသေငျ့ သနညျး။ ကနြျောတို့အားလုံး အသကျရှငျသနျ ရပျတညျနသေရှေ့ စားနိုငျသောကျနိုငျနသေေးသရှေ့ အလုပျဟူသမြှကို တနျဖိုးထားလေးစား နရေမညျ သာ။ ထိုကား အလုပျနှငျ့လူ၊ လူနှငျ့အလုပျ၏ လေးနကျ ခိုငျမွဲသော သမုဒယသစ်စာတဈခုသာတညျး။
သို့သျော မြားသောအားဖွငျ့ လုပျငနျးခှငျထဲမှ လူအမြားစုသညျ အလုပျ၏တနျဖိုး အလုပျ၏လှပသော သစ်စာတရားကို မမွငျတှကွေ့ရသညျကမြားသညျ။ ထို့ကွောငျ့လညျး အလုပျကပေးသော အကြိုးတရားကို အပွညျ့အဝ မစားသုံးနိုငျကွရှာပေ။ အလုပျကိုခဈြလြှငျ အလုပျကပေးသော ဒုက်ခ သုခအပေါငျးတို့ကို လိုလို ခငျြခငျြကွိုဆိုနရေမညျသာ။ အခြို့လူမြားက အလုပျ သာလိုခငျြသညျ။ အနညျးငယျမြှ အပငျပနျးမခံခငျြ ကွ။ မိမိနရောနှငျ့ အနညျးငယျကှာလှမျးသော နရော ဌာနတှငျ အလုပျလုပျမညျကိုပငျ ဒုတိယကမ်ဘာစဈ အတှငျးမှ စဈဘေးဒုက်ခသညျကွီးလို တငွီးငွီးတငွူငွူ ဖွဈကွရပသေညျ။
ငါ့နှယျကံဆိုးခကျြကတော့ကှယျ. ငါ့လောကျ ကံဆိုးသူမြား သညျကမ်ဘာပျေါဝယျ ရှိနိုငျတော့မညျ မထငျပါ။ ]အစရှိသဖွငျ့ တှေးတောစိုးရိမျနတေတျ ကွပသေညျ။ ထိုသူမြားသညျ စဈမရောကျခငျက မွားကုနျနကွေသူမြားဖွဈသညျ။ တဈခုခုကို မလုပျရသေးခငျ ဖွဈမှဖွဈပါ့မလားဆိုပွီး ကွောငျ့ ကွစိုးရိမျပူပနျနကွေသူမြားသညျ အကွောငျးကိစ်စ တဈခုခုကွုံလာပါက မညျကဲ့သို့ ဦးဆောငျဖွရှေငျး ရမညျကို မခနျ့မှနျးမဆုံးဖွတျကွတော့ပေ။ ထိုပွဿနာ ကို ကိုငျတှယျဖွရှေငျးပေးနိုငျမညျ့သူကိုသာ မြှျောလငျ့ နတေတျကွသောကွောငျ့ ထိုသူတို့၏ ဘဝတဈ လြှောကျလုံး မညျသညျ့အခါမြှခေါငျးဆောငျ ဖွဈလာ ကွတော့မညျမဟုတျပေ။
ထိုသူမြားသညျ နောကျလိုကျသကျသကျဖွဈဖို့သာ မှေးဖှားလာကွသူမြားဖွဈတော့သညျ။
သို့သျော သကျဆိုငျရာလုပျငနျးနယျပယျ အသီးသီးတှငျ အောငျမွငျနသေူအမြားစုသညျ တဈခြိနျတုနျးက နောကျလိုကျကောငျးမြား ဖွဈခဲ့ ကွသညျ။ မိမိတို့သကျဆိုငျရာ တာဝနျမြားကို ကိုယျစှမျးဉာဏျစှမျးရှိသရှေ့ တာဝနျယူခဲ့ကွသူမြား သာဖွဈကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ထိုသူတို့၏ ကောငျးမွတျမှနျကနျသောဆုံးဖွတျခကျြနှငျ့ မဆုတျ မနဈသောခံယူခကျြမြားကွောငျ့ လုပျငနျးနယျပယျ အတှငျး အလုပျလုပျရငျး လလေ့ာသငျယူခဲ့ကွသညျ။ သူဌေးလုပျငနျးကို မိမိလုပျငနျးသဖှယျ သဘောထား ပေးဆပျခဲ့မှုကွောငျ့လညျး အလုပျလုပျနိုငျစှမျးမြား၊ ပငျကိုအရညျသှေးမြား တိုးတကျမွငျ့မားခဲ့ရသညျ။ ထို့ကွောငျ့လညျး ထိုကျတနျသောနရောတဈခုကို ရရှိခဲ့ကွသညျသာ။ ထိုအရာမြားကာ အလုပျကပေး သော တနျပွနျမှု အနညျးငယျမြှသာတညျး။
ထို့ကွောငျ့လညျး ကမ်ဘာကြျော ဗူငဘဘေေ လုပျငနျးစု၏ င်ျသကညိနမ ဖွဈသူဲူခွေုေ မှ ဒဒဥညခန ငည ပသကမူငျနယ အမပ သြာနအ့ငညါ.ဒဒ ဆိုပွီး ပွောဆိုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ တကယျလညျး ကနြျောတို့ အားလုံးဟာ ဘဝမှာ တဈကွိမျတဈခါတော့ တဈစုံ တဈခုအတှကျ အပွငျးအထနျကွိုးစား သငျ့သညျပဲ မလား။ ထိုတဈစုံတဈခုက ကနြျောတို့ရဲ့ အောငျမွငျမှု သို့မဟုတျ စညျးစိမျဥစ်စာဖွဈနနေိုငျသညျ။ တဈခါတဈရံ မှာ ငှကွေေးနှငျ့ မတ်ေတာတရားအတှကျလညျး ဖွဈ ကောငျးဖွဈနနေိုငျပညသညျ။ ထိုအရာမြားက ကနြျော တို့ဘဝရှငျသနျမှုအတှကျ အရေးပါသော ဒေါကျတိုငျ ကွီးမြားပငျ မဟုတျပါလော။ ထို့အတှကျ ကွောငျ့ ကနြျောတို့ကွိုးစားရမညျသာ။
အခြုပျအားဖွငျ့ လုပျငနျးခှငျထဲတှငျလညျး တနျရာတနျကွေးပေးလို့ လုပျရသညျဆိုခွငျးထကျ ကနြျောတို့ ပိုမိုလုပျဆောငျနိုငျပသေညျ။ လုပျငနျးရှငျ သူဌေးက လစာပေး၍ ဝတျကတြေနျးကြေ လုပျရ သညျဆိုခွငျးထကျ မိမိတာဝနျိဲ တှငျ စတေနာ ဆိုသောအရာကို သကွားဖွူးပေးနိုငျပသေညျ။ စတေနာဖွငျ့လုပျကိုငျဆောငျရှကျခွငျးနှငျ့ လစာပေး သောကွောငျ့ ဝတျကတြေနျးကြေ လုပျရခွငျး၏ အကြိုးရလဒျသညျ အပုံကွီးကှာခွားလှ၏။ မိမိ သူဌေး၏ လုပျငနျးသညျ မိမိလုပျငနျးပငျဖွဈသညျ ဟူ၍ ခံယူခကျြထားက လုပျငနျးရရှေညျတိုးတကျနိုငျပွီး သငျ့၏ ကိုယျရညျကိုယျသှေးလညျး လိုကျပါတိုးတကျ လာမညျဖွဈ၍ ထိုအရာကား အဖိုးမဖွတျနိုငျသော ခံယူခကျြကောငျးပတေညျး။
အလုပ်..အလုပ်..အလုပ်.. အရွယ် ရောက်နေသော လူငယ်တစ်ယောက်အတွက် အလုပ်တစ်ခုခုတော့ ရှိရမည်သာ။ ]အလုပ်} ဆိုသော ဝိသေသတစ်ခု နာမည်တစ်ခုသည် ပုံမှန်ဝင်ငွေရဖို့ထက် ပိုမိုလေးနက်သည်။ အဓိပ္ပာယ်အများကြီး သက်ရောက် ရပေမည်။ သို့မှသာ အလုပ်၏သဘောတရားသည် လည်း တန်ဖိုးမြင့်တက်လာရပေမည်။
အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ယူရမည်သာ။ ဆိုက်ကား နင်းသောအလုပ်၊ ကူလီထမ်းသောအလုပ်၊ သန့်ရှင်း ရေးအောက်ခြေသိမ်း ဗာဟီရအလုပ်များမှသည် မန်နေဂျာ၊ ရုံးအုပ်၊ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာရာထူးများထိ ]အလုပ်} ဆိုသော ဝိသေသထဲ၌ ကိန်းဝပ်တည်ရှိပေ၏။ ဒါက အလုပ်ကပေးသော သစ္စာတရား။ ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့အားလုံး အလုပ်ပေါ်တွင် သစ္စာပြန်ရှိရ ပေမည်။
]သူတစ်ပါးအလုပ် လုပ်နေတာပဲကွာ၊ ပေးထား တဲ့လစာနဲ့တန်အောင်ပဲ လုပ်ပေးမှာပေါ့} ဆိုသည့် အတွေး သင့်ခေါင်းထဲဝင်လာခဲ့လျှင် ချက်ချင်းထုတ်ပစ် သင့်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအတွေးသည် သင်၏ ဖြစ်တည်နိုင်စွမ်းကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်။ သင်၏အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို အဟန့်အတားဖြစ်စေ နိုင်သည်။ အချို့ဝန်ထမ်းများ အရည်ချင်းရှိပါလျက် တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ရခြင်းမှာ ထို တစ်ရာပေးပြီး တစ်ရာပြန်ရလိုသော စိတ်ဓာတ် ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အလွယ်တကူ တွေးကြည့် လျှင်တော့ ထိုအတွေး ထိုသီအိုရီကြီး မှန်ကန်လှပေ သည်ဟု ကောက်ချက်ဆွဲသုံးသပ်ကြသူ များပေလိမ့် မည်။ သို့သော် ထို့ထက်ပိုပြီး လက်တွေ့ကျကျ သုံးသပ် ကြည့်ပါက အနည်းငယ်လွဲမှားနေသည်ကို သိရှိရ ပေမည်။ အခြေခံအကျဆုံးသီအိုရီကား ဥစ္စာရှိသူကား ဥစ္စာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ ငွေကြေးရှာဖွေသည်။ ပညာရှိ သူကား ပညာကိုအရင်းအနှီးပြုကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ကြရ၏။ ပညာရော ဥစ္စာပါ မရှိရှာသူကား မိမိ၏ ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့်သာ ရင်းနှီးရ၏။
ကျနော်တို့ ဝန်ထမ်းဖြစ်ရခြင်းမှာ သူဌေးများကဲ့သို့ ပစ္စည်းဥစ္စာမရင်းနှီးနိုင်၍ ပညာအားသော်လည်း ကောင်း၊ လူအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ရင်းနှီး ပေးဆပ်ကြရ၏။ သူတစ်ပါးလက်အောက် ဝန်ထမ်း ဖြစ်လာ၍ မလုပ်ချင်လုပ်ချင်နှင့် တွေဝေနေ၍မဖြစ်။ အလုပ်သည် ကျနော်တို့ကို ထမင်းကျွေး၏။ အလုပ် သည် ကျနော်တို့ကိုငွေကြေးပေး၏။ အလုပ်သည် ကျနော်တို့ ဖြစ်စေချင်သော ဘဝရည်မှန်းချက် အနာဂတ်အိပ်မက်များကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်၏။
ထိုသို့သော ကျေးဇူးများပြားလွန်းသည့် ]အလုပ်} ကို အဘယ်မှာလျှင် မချစ်ဘဲမနေရအံ့နည်း။ အဘယ်မှာလျှင် တန်ဖိုးမထားမလေးစားဘဲ နေသင့် သနည်း။ ကျနော်တို့အားလုံး အသက်ရှင်သန် ရပ်တည်နေသရွေ့ စားနိုင်သောက်နိုင်နေသေးသရွေ့ အလုပ်ဟူသမျှကို တန်ဖိုးထားလေးစား နေရမည် သာ။ ထိုကား အလုပ်နှင့်လူ၊ လူနှင့်အလုပ်၏ လေးနက် ခိုင်မြဲသော သမုဒယသစ္စာတစ်ခုသာတည်း။
သို့သော် များသောအားဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှ လူအများစုသည် အလုပ်၏တန်ဖိုး အလုပ်၏လှပသော သစ္စာတရားကို မမြင်တွေ့ကြရသည်ကများသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အလုပ်ကပေးသော အကျိုးတရားကို အပြည့်အဝ မစားသုံးနိုင်ကြရှာပေ။ အလုပ်ကိုချစ်လျှင် အလုပ်ကပေးသော ဒုက္ခ သုခအပေါင်းတို့ကို လိုလို ချင်ချင်ကြိုဆိုနေရမည်သာ။ အချို့လူများက အလုပ် သာလိုချင်သည်။ အနည်းငယ်မျှ အပင်ပန်းမခံချင် ကြ။ မိမိနေရာနှင့် အနည်းငယ်ကွာလှမ်းသော နေရာ ဌာနတွင် အလုပ်လုပ်မည်ကိုပင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းမှ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ကြီးလို တငြီးငြီးတငြူငြူ ဖြစ်ကြရပေသည်။
ငါ့နှယ်ကံဆိုးချက်ကတော့ကွယ်. ငါ့လောက် ကံဆိုးသူများ သည်ကမ္ဘာပေါ်ဝယ် ရှိနိုင်တော့မည် မထင်ပါ။ ]အစရှိသဖြင့် တွေးတောစိုးရိမ်နေတတ် ကြပေသည်။ ထိုသူများသည် စစ်မရောက်ခင်က မြားကုန်နေကြသူများဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုကို မလုပ်ရသေးခင် ဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလားဆိုပြီး ကြောင့် ကြစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသူများသည် အကြောင်းကိစ္စ တစ်ခုခုကြုံလာပါက မည်ကဲ့သို့ ဦးဆောင်ဖြေရှင်း ရမည်ကို မခန့်မှန်းမဆုံးဖြတ်ကြတော့ပေ။ ထိုပြဿနာ ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့်သူကိုသာ မျှော်လင့် နေတတ်ကြသောကြောင့် ထိုသူတို့၏ ဘဝတစ် လျှောက်လုံး မည်သည့်အခါမျှခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာ ကြတော့မည်မဟုတ်ပေ။
ထိုသူများသည် နောက်လိုက်သက်သက်ဖြစ်ဖို့သာ မွေးဖွားလာကြသူများဖြစ်တော့သည်။
သို့သော် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ် အသီးသီးတွင် အောင်မြင်နေသူအများစုသည် တစ်ချိန်တုန်းက နောက်လိုက်ကောင်းများ ဖြစ်ခဲ့ ကြသည်။ မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ တာဝန်ယူခဲ့ကြသူများ သာဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသူတို့၏ ကောင်းမြတ်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် မဆုတ် မနစ်သောခံယူချက်များကြောင့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ် အတွင်း အလုပ်လုပ်ရင်း လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသည်။ သူဌေးလုပ်ငန်းကို မိမိလုပ်ငန်းသဖွယ် သဘောထား ပေးဆပ်ခဲ့မှုကြောင့်လည်း အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းများ၊ ပင်ကိုအရည်သွေးများ တိုးတက်မြင့်မားခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ထိုက်တန်သောနေရာတစ်ခုကို ရရှိခဲ့ကြသည်သာ။ ထိုအရာများကာ အလုပ်ကပေး သော တန်ပြန်မှု အနည်းငယ်မျှသာတည်း။
ထို့ကြောင့်လည်း ကမ္ဘာကျော် ဗူငဘဘေေ လုပ်ငန်းစု၏ င်္သကညိနမ ဖြစ်သူဲူခေုြေ မှ ဒဒဥညခန ငည ပသကမူင်နယ အမပျသာနအ့ငညါ.ဒဒ ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်လည်း ကျနော်တို့ အားလုံးဟာ ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ တစ်စုံ တစ်ခုအတွက် အပြင်းအထန်ကြိုးစား သင့်သည်ပဲ မလား။ ထိုတစ်စုံတစ်ခုက ကျနော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှု သို့မဟုတ် စည်းစိမ်ဥစ္စာဖြစ်နေနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မှာ ငွေကြေးနှင့် မေတ္တာတရားအတွက်လည်း ဖြစ် ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပညသည်။ ထိုအရာများက ကျနော် တို့ဘဝရှင်သန်မှုအတွက် အရေးပါသော ဒေါက်တိုင် ကြီးများပင် မဟုတ်ပါလော။ ထို့အတွက် ကြောင့် ကျနော်တို့ကြိုးစားရမည်သာ။
အချုပ်အားဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင်လည်း တန်ရာတန်ကြေးပေးလို့ လုပ်ရသည်ဆိုခြင်းထက် ကျနော်တို့ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပေသည်။ လုပ်ငန်းရှင် သူဌေးက လစာပေး၍ ဝတ်ကျေတန်းကျေ လုပ်ရ သည်ဆိုခြင်းထက် မိမိတာဝန်ိဲ တွင် စေတနာ ဆိုသောအရာကို သကြားဖြူးပေးနိုင်ပေသည်။ စေတနာဖြင့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လစာပေး သောကြောင့် ဝတ်ကျေတန်းကျေ လုပ်ရခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်သည် အပုံကြီးကွာခြားလှ၏။ မိမိ သူဌေး၏ လုပ်ငန်းသည် မိမိလုပ်ငန်းပင်ဖြစ်သည် ဟူ၍ ခံယူချက်ထားက လုပ်ငန်းရေရှည်တိုးတက်နိုင်ပြီး သင့်၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလည်း လိုက်ပါတိုးတက် လာမည်ဖြစ်၍ ထိုအရာကား အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ခံယူချက်ကောင်းပေတည်း။